In kabadan 200 oo shaqaale "titan project" ah oo ka baxsan mashruuca | Waxaan ka socdaa mac
Macluumaadka si toos ah uga yimaada warbaahinta caanka ah ee CNBC, wuxuu sharxayaa in afhayeen u hadlay shirkadda Cupertino uu xaqiijin lahaa in ka badan 200 oo shaqaale ah ee loogu yeero "mashruuca Titan" ama mashruuca Titan, ka noqday mashruucii una wareegay xilal kale oo mashaariic kale ah.
Tani macnaheedu maahan in Apple ay dhinac iska dhigtay shaqadan si loo horumariyo nidaamka ismaamulka ee baabuurta, taas oo muujineysa in injineerka ka yimid Tesla dhowr bilood ka hor, Doug Field, uu fulin doono, isaga iyo Bob Mansfield, dib u habeyn kooxda.
Tan iyo 2014-kii oo ka shaqeynayay mashruucan Titan
Koobka Cupertino waxay ku lug lahaayeen mashruucan ilaa 2014 runtiina waxay tahay markii ay u muuqatay inay shirkadu ku hawlan tahay samaynta baabuur koronto u gaar ah, wax walba waxay umuuqdeen xoogaa iskudhafan. Runtu waxay tahay in dhowr sano kadib si rasmi ah loo shaaciyey inay ka shaqeynayaan hagaajinta barnaamijka gawaarida iswada iyo sanadihii la soo dhaafay waxay sii wadeen inay saacado ku daraan mashruuca. Wararka sheegaya in CNBC ma ahan talaabo gadaal, kaliya hal talaabo oo dheeraad ah si loo hagaajiyo barnaamijkan.
Tim Cook laftiisa Wuxuu horeyba usheegay dhowr jeer inay xooga saarayaan koox awood badan hagaajinta gawaarida iswada:
Waxaan diirada saareynaa nidaamyada iswada ee gawaarida. Kani waa teknolojiyad aan u aragno inay aad muhiim ugu tahay qorshayaasheena waana sii wadaynaa ka shaqeynta si loo horumariyo tan iyo dhammaan mashaariicda Ai.
Hubso in dhimista kooxdu ay kooxda u keeni doonto qaybo gaar ah mustaqbalka fog, ma jiraan macluumaad badan oo ku saabsan tirada dadka ka shaqeeya horumarinta Mashruuca Titan, laakiin waa hubaal inaysan ahayn dad tiro yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » In yar in ka badan 200 oo shaqaale "Project Titan" ah ayaa laga reebay mashruuca
Beta-kii ugu horreeyay ayaa loo heli karaa horumariyeyaasha macOS Mojave 10.14.4, iOS 12.2, watchOS 5.2 iyo tvOS 12.2